Dacwaddii Instagram oo maanta ka bilaabanaysa maxkamadda Göteborg - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Alexander Ehn/Scanpix
Dacwaddii Instagram oo maanta ka bilaabanaysa maxkamadda Göteborg
La daabacay måndag 3 juni 2013 kl 10.26
Waxaa maanta ka bilaabanaya maxkamadda degmada Göteborg dacwaddii lagu soo oogay laba gabdhood oo lagu soo eedeeyey in ay bishii Diseember ee sannadkii hore ku qoreen shabakadda Instagram qoraallo ay ku aflagaaddeyeen 45 dhallinyaro ah oo isugu jira gabdho iyo wiilal. Dhacdadaani waxay kor u qaadday ashtakooyinka ay soo gudbiyaan dadka ku nool gobolka Västra Götaland oo dareensan in Internet lagu aflagaaddeeyey.
Ereyada aflagaaddada ama sharaf-ridka ah oo ay labadaas gabdhood ku sifeeyeen dhallinyarada waxaa ka mid ahaa ”dhillo daroogiiste ah!, ”urtow uf” iyo ”dhillo shuluq”. Arrintaan waxaa ka dhashay in dhallinyaro boqolaal gaaraaya ay ka careysiiso oo ay 18kii Diseember isugu soo baxaan bannaanka dugsiga sare ee lagu magacaabo Plusgymnasiet. Waxay dhallinyaradaani isugu soo baxeen in ay la kulmaan dadkii aflagaaddadaan qoray. Waxaana ka dhashay dibed-bax rabshado weheliyeen oo socdey laba maalmood.
Gabar markii hore lagu lagu tuhmay in ay falkaas gashay ayaa laba toddobaad kadib laga saaray tuhunkii. Waxaase hadda la tuhunsan yahay in ay ka dambeeyeen laba gabdhood oo da’doodu kala tahay 15 iyo 16 sano. Gabdhahaas ayaana maanta la horkeenayaa maxkamadda degmada Göteborg. Mid ka mid ah gabdhahaas waa ay qiratay dembigaas, halka ay tan kale beenineyso in ay dembigaas lagu soo eedeeyey gashay. Arrintaan ku saabsan falkaas aflagaaddada ah waxaa aad loogaga faallooday laamaha warbaahinta, taas oo keentay in ay boliiska soo gaaraan ashtakooyin badan oo ku saabsan falal noocaas ah. Anders Börjesson oo ah madaxa waaxda baaritaanada ee boliiska wuxuu arrintaan ka yiri:
- Waxaan rumeysanahay in aan hadda dhugmo gaar ah u yeelanay arrimaha noocaan oo kale ah waayo ma aha wax la aqbali karo. Run ahaantiina waa wax habboon in ashtako laga soo gudbiyo falalka noocaas ah.
Xaqiiq: Is daba joogga dhacdada
Xaqiiq: Aragtida xeeraka ee dhacdada